IMalta Cross Štěpánka I-Checkout Tower
Ngo-2011, isiphambano esikhulu samatshe sakhiwa kabusha ngaphansi kwe-Štěpánka Lookout Tower. Esiphambanweni esesimeni yemihlobiso yempi yamaNazi ye-Iron Cross ayibuyelwanga i-swastika eyacekelwa phansi ngabashisekeli baseCzech ngo-1945. Isiphambano sibonisa indawo yokuhlonipha eyakhiwa izakhamizi zaseJalimane ngo-1944 ukukhumbula amasosha aseJalimane awele phesheya. Amagama emizana abhalwe ematsheni futhi kwafakwa izigqoko zokuvikela izimbali kuwo. Ngemuva kuka-1945, isiphambano kanye nokuxoshwa kwamaJalimane kwabhujiswa.
zintaba itshe lesiphambano Kořenov Isiphambano saseMalta indawo yokubuka outtěpánka ebusika
Amathegi: zintaba itshe lesiphambano Kořenov Isiphambano saseMalta indawo yokubuka outtěpánka ebusika
Indawo: 468 48 Korenov, Czech Republic